I-China i-SWMC-370-DTH yokwahlulahlula okunyibilikisiweyo umphezulu we-hydraulic ezantsi-emngxunyeni wokugrumba umvelisi kunye noMthengisi | Shehwa
I-SWMC-370-DTH rig isetyenziswa ngokubanzi kwimigodi evulekileyo efana nesamente, isinyithi, imigodi yamalahle, iikwari, ukuqhuma imingxunya kuloliwe, kuhola wendlela, kulondolozo lwamanzi, kumandla ombane kunye neeprojekthi zokwakha ukhuseleko kuzwelonke.
I-SWMC-370-DTH rig isetyenziswa ngokubanzi kwimigodi evulekileyo efana nesamente, isinyithi, imigodi yamalahle, iikwari, ukuqhuma imingxunya kuloliwe, kuhola wendlela, kulondolozo lwamanzi, kumandla ombane kunye neeprojekthi zokwakha ukhuseleko kuzwelonke. Ubungakanani bomngxuma wayo wobubanzi yi-90-178mm, enokuxhotyiswa ngeendlela ezahlukeneyo zecompressors zomoya ukuze kuqinisekiswe ukubhola koxinzelelo lwe-DTH.
Isinxibelelanisi samazinyo esithe tye sinokunyuka okuphantsi kobushushu, ukuthwala umthwalo omkhulu kunye nobomi benkonzo ende, enokuhlengahlengisa isantya sokujikeleza ngokungqinelana nelitye. Intloko ejikelezayo ixhotyiswe nge-Eton hydraulic motor ukufezekisa imeko yomsebenzi ozinzileyo. Ixhotyiswe ngokuqiniswa kokudityaniswa kokudanjiswa ukunciphisa amandla okuphendula kwimingxunya yokomba ukonakalisa iR rotary reducer.
Umqokeleli uthuli wamkela itekhnoloji yokunyanzeliswa kokucoca uthuli, olunamandla okucoca uthuli, ukusebenza kakuhle kokususa uthuli, uxinzelelo oluphezulu lokungcola, inqanaba lokuvuza lomoya ophantsi, ukusetyenziswa kwamandla okuphantsi, ukusebenza okuzinzileyo nokuthembekileyo, nokukhusela impilo yabaqhubi. Ngezinto ezikumgangatho ophezulu wokucoca ulwelo, ukusebenza kokususa uthuli kunye nobomi benkonzo ziqinisekisiwe.
Umngxuma wokubhola umngxuma 90-178mm
Uxinzelelo loxinzelelo lomoya 1.7-2.5 MPA
Ukujika kwetorque 3280N.m
Isantya sokujika 0-110Rpm
Isilayidi esityibilikayo ujingi Ekhohlo 54 ° / Ekunene 50 °
Ukutyibilika isakhelo isamente 135 °
Drilling boom wamisa tyaba 22 ° / 65 °
Amandla alinganisiweyo 73.5 / 92 Kw
Egqithileyo I-SWMC-360-DTH ecekeceke okwethutyana inyusa umphezulu we-hydraulic ezantsi-emngxunyeni wokumba
Okulandelayo: I-SWMC-380-DTH Pneumatic Drilling Rig